မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: အင်တာဗျူးမေးသူနှင့်ဖြေသူ(၂)
ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့သော အင်တာဗျူးများ(ကိုယ်တွေ့)ကွန်ပြူတာသင်တန်းတွေစုံအောင်တက်ပြီး ရထားတဲ့လက်မှတ်တွေက A4 အထုပ်ရဲ့တ၀က်စာလောက်ရှိတယ်။ ယုံမလားတော့ မသိဘူး။ နည်းနည်းတောင်မှထပ်မလျှော့နိုင်ဘူး(လိပ်ကနေ ကြမ်းပိုးဖြစ်မစိုးလို့) :Pလက်မှတ်တွေမလိုပဲ အလုပ်ပေးတာက KMD Computer Center က Teacher Daw Tin TinAye ကျမကနယ်ကနေ စကောလာရလို့ သင်တန်းတက်ရင်း အလုပ်အတွေ့အကြုံလိုချင်ရင်Sales မှာ လုပ်ဖို့ နေရာပေးတယ်။ ဒါပေသိ ကျမက ဂျီးထူတယ်။ Service sectionမှာပဲ နေချင်ပါသဗျ။ အဲဒါနဲ့ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။လျှောက်ဖြစ်တာက TMW Enterprise(Sony Co.) လေ။ ရာထူးက Network Engineerအဟိဟိ မတန်မရာလို့ မပြောပါနဲ့ ။ ဆရာ ဦးသိန်းထွန်းဦး လက်ထွက် တပည့်ရှော်အရင်းခေါက်ခေါက်ဗျ။ အဲ..ထားပါတော့ အဲဒါနဲ့ အင်တာဗျူးသွားဖြေရတယ်ပေါ့နော်။မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီမှာ အင်တာဗျူးတဲ့ ဦးလေးကြီးက အသက်၄၀ကျော်ရုံလေးပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ ခင်ဗျားက လက်မှတ်တွေအများကြီးပဲ။ ဒါပေသိ တကယ်တတ်လားဆိုပြီး လက်တွေ့ ပဲဆာဗာမှာ ထိုင်ပြီး right တွေ ပေးခိုင်းတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင် ကျမသိပ်မကျွမ်းကျင်ဘူးလေ။ သူက ရယ်ပြီးပြောတယ် trainingပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဂျပန်ကို 3လလောက်သွားရမယ်။ bond တော့3နှစ်ထိုးရမယ်တဲ့။ သူကတော့ ကျမလို လက်မှတ်တွေမရှိပေမဲ့ သူက တတ်ပါတယ်တဲ့။အဟက်ဟက် ကျမက ပြန်ပြောတယ် ကျမလဲ ဦးလို အရွယ်ရောက်ရင် ဦးထက်တောင်ကျွမ်းချင်ကျွမ်းနေမှာလို့။( ငါကွ..) သူက စိတ်မဆိုးပါူဘူး ပေးတဲ့ လခကလဲအဲဒီခေတ်က ရွှေငါးမူးသားလောက် ၀ယ်လို့ရမယ်။ ကျမက မခံချင်စိတ်နဲ့ခေါင်းမာတာ(တလွဲဆံပင်ကောင်းခဲ့တာလေးက) bond ကို ၂နှစ်ပဲ ထိုးနိုင်မယ်၃နှစ်ဆို မလုပ်နိုင်ဘူးလို့။ အဲလိုနဲ့ပဲ လွဲခဲ့လေသတည်း အဟီးဟီးအဲလိုနဲ့ ကျမ ထပ်လျှောက်ဖြစ်တာတွေက စက်ကပ်ကြေး(secretary) အနေနဲ့ SunTravel မှာ လျှောက်ဖြစ်တယ်။(အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်တန်း)နေရာရှာမတွေ့လို့ ၁၀မိနစ်လောက်နောက်ကျပီးမှ ရောက်တယ်။ ဂျပန် ကုမ္ပဏီမလို့မျက်နှာမလှဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ ကျောင်းမပြီးသေးပဲ သူတို့ အလုပ်ခန့်လို့ကျောင်းစာ လစ်ဟင်းတာက သူတို့ အတွက် ငရဲကြီးမှာစိုးတယ်ဆိုပဲ အံ့ရောအံ့ရော။ ဒါပေသိ ကျမကို အချိန်ပိုင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ restaurant မှာ cashierလာလုပ်ပါလားတဲ့။ ကျမလဲ နိုးပါပဲ။ကွန်ပြူတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် ဂျပန်ကုမ္ပဏီတခုမှာလဲ ထပ်လျှောက်တော့ခေါ်တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ လစာက $100 ပေးပါတယ်။ ဒါပေသိ မြန်မာမှာ မထားဘူးတဲ့။ဂျပန် သို့မဟုတ် Cambodia မှာသွားလုပ်ရမတဲ့။ သူက အဲလိုပြောပြကတည်းက ကျမကမြန်မာမှာ သို့မဟုတ် ဂျပန်မှာဆိုရင် လုပ်မယ်လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ အဲဒီအင်တာဗျူးမှာ ရေးဖြေ အရင်ဖြေပြီး အမှတ်မီမှ နေ့လည်တခေါက်လက်တွေ့ထပ်ဖြေရပါတယ်။ လက်တွေ့ဖြေပြီး လူတွေ့ ဖြေရတာမလို့ အချိန်ကတနေကုန်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကုမ္ပဏီက အင်တာဗျူးလာဖြေသူတိုင်းကို စာအိတ်လေးနဲ့မုံ့ဖိုး နဲ့ လမ်းစရိတ်ပါဆိုပြီး appreciate လုပ်ပေးတာ လေးစားကျေနပ်စရာအတွေ့အကြုံလေးပါ။ အဲဒီအလုပ်လဲ ကျမ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။နောက်တခုကလဲ စက်ကပ်ကြေး(secretary) အနေနဲ့ ပဲ Total Learning မှာသေချာရောက်သွားပြီးမှ ခေါ်တဲ့ပို့စ်က accountant ပါတဲ့ဗျာ။ နောက်ရက်မှစာရောက်လာတယ် စက်ကပ်ကြေး vacancy ရှိရင် အကြောင်းကြားပါမယ်တဲ့။ ကျမကသင်္ချာနဲ့ ကျောင်းပြီးထားလို့ accountant ကိုခေါ်တာကို အသိကမှားအကြောင်းကြားတာပါတဲ့။အော် ဒါမျိုးတွေလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ချော်တောငေါ့ပြီး မန်းလေးက နိုဗိုတယ်(အခု Mandalay Hill Resort) မှာလဲReceptionist လျှောက်ဖြစ်သေးသဗျို။ ကျမအဖြေမှားခဲ့တာလေးကGM(နိုင်ငံခြားသားပါ) ကမေးတယ် နောင် အသက် ၃၀မှာ မင်းကိုယ်မင်းဘာဖြစ်ချင်သလဲတဲ့။ ကျမကလဲ အမြီးကျမှတစ်ရတယ်လို့ ။ အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့။ အဲ့မှာပဲသေပြီဆရာ အဟိဟိ။ သူက ပြန်ပြောတယ် မင်းက receptionist မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုပဲ စလုပ်ပါတဲ့။ (သူတို့လိုချင်တာက hierarchy အရFO Manager တို့ဘာတို့ ဖြစ်စေချင်တာထင်ပါရဲ့) နောက်တချက်က ကျမအရပ်မမီဘူးဗျ။ ၅ပေ ၁လက်မပဲရှိတာမလို့ သူတို့ ခန့်လိုက်တဲ့ သူတွေက၅ပေ၃လက်မအထက်တွေ များပါသဗျ။အင်တာဗျူးကို အိမ်တိုင်ရာရောက်လာဗျူးပေးတာကတော့ Bonita Cosmeticsကုမ္ပဏီကပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမက ခြေကျိုးနေရင်းနဲ့ အဲဒီအလှကုန်တွေဖြန့်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေလို့ပါ။ စစချင်းက Colors Cosmeticsတွေကို ကျမက တပိုင်တနိုင် မန်းလေးမှာ ယူဖြန့်နေရင်းက Follow Me, Bonita &others cosmetics တွေပါ ဖြန့်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ contact လုပ်မိတော့Bonita က ကျမကို စိတ်ဝင်စားပါသတဲ့။ သူ့ ပစ္စည်းတွေကိုလဲ ကျမက၀ယ်ပြီးဖြန့်တဲ့ ရောင်းအားကို သဘောကျတာနဲ့ အဲဒီကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်က မန်းလေးကိုလာရင်းနဲ့ ကျမကို ၀င်တွေ့တာပါ။ခြေကျိုးနေပေမဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နေနိုင်တဲ့ကျမကို ကျမရဲ့ ယုံကြည်ချက် ခြေလှမ်းတွေကို အင်တာဗျူးလုပ်သွားပြီးပစ္စည်းတွေကို consignment system( အဟောင်းပေး အသစ်ယူ တလနေမှပေး) နဲ့အထက်မြန်မာပြည် ကိုယ်စားလှယ် (ဈေးချိုမှလွဲ၍) အဖြစ် အလုပ်ပေးလုပ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ sales team က ကျမနဲ့ ကျမသူငယ်ချင်း မန်နေဂျာ မပါပဲ ၇ယောက်ရှိပါတယ်။ ၂နှစ်လောက်လုပ်ပြီးမှ နောက်ဆုံးမှာ အဲဒီအလုပ်လဲရပ်နားသွားရပါတယ်။ (ကျမ မိုးကုတ် KMD မှာ ကွန်ပြူတာ ဆရာမသွားလုပ်ဖြစ်လို့ပါ။ မိုးကုတ်အကြောင်းတွေ ရေးဖို့ လဲစာကြွေးကျန်သေးသဗျို)မိုးကုတ် KMD မှာ ဆရာမလုပ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ရန်ကုန်က internationalschool တခုမှာတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ အင်တာဗျူးအောင်ပြီး ဆရာမထပ်လုပ်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ မေးတဲ့ သူဌေးကတော့ ကလေးတွေကို ချစ်သလားတဲ့။ချစ်ပါတယ်လို့။ အဲတော့ ဘာမေးလဲဆိုတော့ ဘယ်လောက်ထိ ချစ်သလဲတဲ့။အယ်…ကိုယ်ပိုင်သားသမီးလဲ မရှိဘူး။ တူ၊တူမလဲ မရှိသေးဘူး။ ဘယ်လိုဖြေရပါ့။အဟိဟိ ကျမပြန်ဖြေလိုက်တယ် သူတို့ ဆိုးလို့ ကျမထိန်းမနိုင်ရင်ထိုင်ငိုလောက်တဲ့ အထိ သည်းခံပြီး ချစ်တယ်လို့ (အမယ်မယ် မယုံမရှိနဲ့တကယ်ချစ်တာပါ)။ စကားစပ်လို့ ပြောရဦးမယ်။ မိုးကုတ် KMD မှာတုန်းကinstructor လာလျှောက်တဲ့ ကောင်မလေးကို ကျမက အင်တာဗျူးတုန်းက ညီမလို့အမတို့ သင်တန်းမှာ ကလေးတွေလဲ သင်တော့ သူတို့က ပြောတဲ့အတိုင်းနားမထောင်ရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ သူက ပြန်ဖြေတယ် ..ခေါင်းခေါက်ပစ်မယ်တဲ့။ မပူပါနဲ့ အိမ်မှာဆိုလဲ ကလေးတွေကို သူက ထိန်းနေကျတစ်ယောက်မှ မဆူညံရဲဘူးတဲ့။ (အမယ်လေးလေး အဲဒီတစ်ယောက်ကိုမခန့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျို)ရန်ကုန်မှာ ကွန်ပြူတာဆရာမလုပ်ပြီး ကျမ ကိုယ့် life ကို ငြီးငွေ့လာတော့Tour guide လုပ်မယ်ဆိုပြီး guide သင်တန်းတက်လို့ guide license ရရောကုမ္ပဏီ ၁၂ခုမှာ တပြိုင်တည်း အလုပ်လျှောက်ပစ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးခေါ်တာကတော့ကျမနဲ့ ရေစက်ဆုံမဲ့ အခုလုပ်နေတဲ့ SM Tours မှာပါ။( အဲလိုစောင့်တာတစ်နှစ်ကျော်ကြာသဗျ)။ဆက်ရန်……
နှစ်သစ်သင်္ကြန်အခါတော်ပွဲ ဆင်နွှဲကြရအောင် ...
Happy BirthDay PK yei!
မြို့စားကြီးမရှိသော မြို့တော်ကြီး တစ်နှစ်ပြည့် အတွ...